प्रश्नः म हाल रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा छु । म कम्पनीबाट छुट्टीमा अव नेपाल आउन लागेको छु । म यहाँ आएको दुई बर्ष पुरा भएको हो । मैले घरायसी प्रयोजनको लागि एउटा टीभि ल्याउने विचार गरेको छु । त्यसको भन्सार लाग्छ की लाग्दैन ?
विजय कुमार राम, महोत्तरी, हाल दोहा कतार
उत्तरः विजय जी, तपाई बैदेशिक रोजगारीमा दुई वर्ष विताएर फर्किन लाग्नु भएको हुँदा त्यसरी फर्किने मध्ये जसले एक बर्ष पुरा गरि फर्किंदै छ
प्रश्नः मलेसियामा बेसिक बढेको साँच्चै हो कि हल्ला मात्रै हो ? हाम्रो कम्पनीले त कुनै जानकारी गराएको छैन, किन होला ?
(सन्तोष घिमिरे गुल्मी जिल्ला हाडहाडे, बर्दबास हाल, मलेसिया)
उत्तरः मलेसियामा बेसिक बढेको हल्ला होईन साँचो हो । मलेसिया सरकारले यहि जुलाई १ देखि लागु हुने गरि यस अघि प्रदान गर्दै आएको ९ सय बेसिकमा एकसय आरएम थप गरिदिएको छ । सरकारले घोषणा गरे बमोजिम सबै कम्पनिले दिनु पर्ने हुन्छ । कत
म मलेसियामा कार्यरत एक नेपाली हुँ । म अवैधानिक रुपमा यहाँ बसेर काम गरिरहेको छु । म काम गर्ने कम्पनीको ईन्चार्जले मलाई हरेक महिना काम गर्ने ठाउँ फेरिदिइरहन्थ्यो । उसले विना कारण मेरो तलव काटिदिन्थ्यो । खासमा उसलाई मैले खानेकुराहरु किनेर नदिएकोले त्यसो गर्ने गर्दथ्यो । त्यसैले मैले आफू आएको कम्पनी छोडेर भागेर काम गर्न थालेको हुँ ।
कम्पनीमा मैले कुरा गर्दा मेरो पासपोर्ट दिएन । अन्यत्र काम खोज्दा वि
प्रश्नः मेरो नाम रवि हो । म कतारबाट फर्केको हुँ । मलाई कतारमा जान प्रतिवन्ध लागेको छ । के म अरु खाडीका देशमा रोजगारीका लागि जान सक्छु होला ?
उत्तरः यसमा दुई फरक स्थीतिका बारेमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । यदि तपाईलाई कतारमा बढी समयसम्म बसेको, रोजगारदाता छोडेर अन्यत्रै काम गरेको जस्ता सामान्य अभियोगमा कतार पस्न प्रतिवन्ध लागेको हो भनें तपाई खाडीका अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि जान सक्नुहुन्छ । तर यदि तपाई
युएईमा कानून विपरित मलाई हटाइयो, अव म के गरौं ?
म युएईको एक कम्पनीमा विगत ५ बर्षदेखि कार्यरत छु । यहि बर्ष म छुट्टीमा एक महिनाका लागि घर गएँ र फर्केर आउँदा कम्पनीले मेरो छुट्टीको पैसा काट्ने बतायो । कम्पनी घाटामा भएका कारण त्यसो गरिएको मलाई बताइयो । मैले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि कम्पनीले मलाई अन्तै काम खोज्न भन्दै जवर्जस्ती निकाल्यो । मैले अन्यत्र काम गरेको छैन । कम्पनीले चार महिनादेखि तलव रोकेर राखेको छ । मैले ५ बर्ष काम गरेवापत कम्पनबाट पाउनु
मसँग मलेसिया लैजान १ लाख ८० हजार माग्यो
म मलेशियाबाट कसरी उम्किन सक्छु होला ?
म अव कतार आउन पाउँछु की पाउन्न ?
युएईमा म यस्तो अवस्थामा पक्राउ परेमा कस्तो सजाय हुन्छ ?